Cumar Cabdirashiid oo sheegay Issimada Jubbooyinka iyo Gedo in ay soo gudbiyeen talobixintii ergooyinka. – Radio Daljir
Abriil 27, 2013 1:02 g 0
Kismayo, Apr 27 ? R/wasaarihii hore ee dawladdii KMG ahayd ee ?federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma?arke oo ka mid ah siyaasiyiinta ku hawllan qorshaha lagu dhisayo dawlad-goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in la meeleeyey qaabkii xulidda ergooyinka m/weynaha dooran doona.
Isla meeldhigga habka xulidda ergooyinku ayaa timid kaddib markii dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey ay shir talobixin ah u fadhiyeen issimada ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, kuwaasi oo loo fariisiyey in ay jaan-gooyaan hannaanka lagu xulayo ergooyinka dooran doonta M/weynaha, waxaana issimada loo door-biday aqoonta iyo waayo-aragnimada ay u leeyihiin dadka iyo deegaanka, sidaasna waxaa sheegay Cumar Cabdirashiid oo maanta shir jaraa?id ku qabtay Kismayo.
Md. Sharma?arke, ayaa sidoo kale shirkiisa jaraa?id ku sheegay haatan in la guda-galayo xuliddii ergooyinka maadaama si rasmi ah loo gorfeeyey dadka iyo deegaannada ay ka kala imaanayaan, waxaana loo sii tallaabi doonaa doorashada M/weynaha.
?Qorshaha dhismaha maamulkaan waxaa uu socday muddo afar sano ah, waxaana ugu dambayntii saxiixday dawladdii midda hadda jirta ka horraysay ee uu M/weynaha ka ahaa Sheekh Shariif, R/wasaarana uu ahaa Prof. Cabdiweli Gaas,
xilligaas dheer waxaa lagu jiray isku-keeniddii beelaha, heshiisiintooda, meelmarinta dastuurka, haddana gabogabo ayey taagan tahay, midna waa in Soomaalidu ay ogaataa wixii halkaan ka soo baxa waa wax Soomaali leedahay, waa maamul hoostaga dawladda federaalka iyo M/weynaha iyo R/wasaaraha hadda jira, wax Soomaali dhisatayna in lagu farxo ma ahane waxay ila tahay wax dhib ah oo ka imaanayaa ma jiraan ? Cumar Cabdirashiid.
Cabdirashiid Cali Sharma?arke R/wasaarihii hore ee Soomaaliya, ?waxaa uu intaasi raaciyey joogitaankiisa magaalada Kismaayo in ay ugu weyn tahay sidii wax loo hagaagin lahaa, dadkuna u wada noolaan lahaayeen, sidoo kalena wax u wadaagi lahaayeen, isagoo tilmaamay meelkasta oo dalka ka mid ah in ay u tagi karaan isla hawsha ay haatan wadaa.
?Intii aan joogay Kismaayo waxaa ii baxday dadku in ay yihiin kuwo wax raba, doonaya in ay ka baxaan fawdadii ay ku soo jireen 20 sano, nidaamna ay yeeshaan. Markasta markii la damco in la xalliyo arrimaha Kismaayo, maamulna loo dhiso waxay ka xallismi waydaa dhanka Xamar, marka dadku waxay rajaynayaan in ay helaan maamul iyaga u dhaw, danahoodana ka shqeeya, dawladda federaalkana hoos taga? Cumar Cabdirashiid.
Ugu dambayntii, waxaa uu tilmaamay dadka deegaannadaasi Jubbooyinka iyo Gedo in ay yihiin dad Soomaaliyeed, waxa ay samaystaanna aysan meelna la aadaynin, ayna hoos tagayaan dawladda federaalka, dhinaca kalena ay muhiim tahay maamul in uu dhismo, dadku wax isku ogaadaan, ?nabadna ku wada noolaadaan, amnigiina la soo celiyo.